ထုတ်ပယ်ခြင်း Law & More BV
ဘ‌‌လော့ခ် » ထုတ်ပစ်ခြင်း
အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းသည် ၀ န်ထမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးဆက်များရှိသည့်အလုပ်ခန့်ထားမှုဥပဒေတွင်အမြင့်ဆုံးသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အလုပ်ရှင်တစ် ဦး အနေနှင့်၊ ၀ န်ထမ်းနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်ရပ်တန့်ခြင်းဟုမခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။ မင်းရဲ့ ၀ န်ထမ်းကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်ဖို့ရည်ရွယ်လား။ ထိုကိစ္စတွင်ခိုင်လုံသောထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်အခြေအနေအချို့ကိုသင်စိတ်စွဲမှတ်ထားရမည်။ ပထမ ဦး စွာသင်အလုပ်ထုတ်ပစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော ၀ န်ထမ်းသည်အထူးအခြေအနေတွင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထိုသို့သော ၀ န်ထမ်းများသည်နှစ်သက်ကြသည် ထုတ်ပယ်ကာကွယ်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်သင့်အတွက်အကျိုးဆက်များကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ Dismissal.site.
သင်၏ ၀ န်ထမ်းအားအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းကိုအောက်ပါအချက်များအနက်မှတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းအခြေခံရမည်။
အလုပ်အတွက်ရေရှည်မစွမ်းဆောင်နိုင်မှု သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောအလုပ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်မကျန်နေလျှင်သို့မဟုတ်
ချွတ်ယွင်းနေသည် သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်မိမိ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်မသင့်တော်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်သရုပ်ပြနိုင်သည့်အခါ၊
culpable လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက် သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်တွင် (အလေးအနက်) ပြုမူလျှင်၊
မကြာခဏပျက်ကွက် သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်ပုံမှန်အလုပ်သို့မလာလျှင်နေမကောင်းဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်မသန်မစွမ်းဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်လက်မခံနိုင်သောအကျိုးဆက်များရှိလျှင်၊
ကျန်နေတဲ့ခိုင်ခိုင်လုံလုံများအတွက်ထုတ်ပယ် သင့်အနေဖြင့်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းနှင့်ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်ကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုရန်မသင့်တော်သောအခြေအနေများရှိပါက၊
အလုပ်လုပ်ရန်အသိစိတ်ကန့်ကွက် သင်သည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းနှင့်အတူစားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်ထိုင်ပြီးအလုပ်ကိုအဆင်ပြေစွာပုံစံဖြင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကပြန်လည်နေရာချထားခြင်းသည်ပြissueနာမဟုတ်ပါ။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဥပဒေအရထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ရှိသည် တိုးပွားလာသောမြေပြင်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာမှအခြေအနေများကြောင့်သင့်အားလုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးလျှင်သင့် ၀ န်ထမ်းကိုလည်းအလုပ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအားအထက်ပါတရား ၀ င်အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုအပေါ်တွင်သာအခြေခံထားရုံသာမက၎င်းတည်ရှိမှုကိုသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။ ထုတ်ပယ်ရန်အတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်ရှိရန်လည်းသီးခြားထုတ်ပယ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ၀ င်သည်။
သင်ရွေးချယ်ပါ စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သို့မဟုတ်အလုပ်မရှိသောကြောင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း (၂ နှစ်ကျော်) ထိုကိစ္စတွင်သင်သည်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် UWV ထံမှထုတ်ပယ်ခြင်းခွင့်ပြုချက်ကိုလျှောက်ထားရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်သင်သည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းကိုထုတ်ပယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသင့်လျော်စွာလှုံ့ဆော်ပေးရမည်။ ထိုအခါသင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်၎င်းကိုခုခံကာကွယ်ရန်အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် UWV က ၀ န်ထမ်းအားအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ ထုတ်ပယ်ရန် UWV ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးသင်၏ ၀ န်ထမ်းကသဘောမတူပါကသင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်အသနားခံစာကိုတရားရုံးသို့တင်သွင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းမှမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက၊ ၀ န်ကြီးဌာနခွဲမှတရားရုံးသည်အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန် (သို့) သင်၏ ၀ န်ထမ်းလျော်ကြေးပေးရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
မင်းသွားမလား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပယ်ချ? ထို့နောက် subdistrict တရားရုံး၏လမ်းကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဒီဟာကမလွယ်ဘူး။ အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်သင်သည်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ကိုပြသရန်၎င်းကို အခြေခံ၍ ကျယ်ပြန့်သောဖိုင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရမည်။ ထို့နောက်မှသာသင်၏ ၀ န်ထမ်းနှင့်အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုမှုအတွက်တရားရုံးကသင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုသင်တင်ပြနေပါသလား။ ထို့နောက်သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်သည်။ သူသည်အဘယ်ကြောင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုသူသဘောမတူကြောင်းသို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ထမ်းကသူသည်ခွဲထွက်ခွင့်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသင့်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ရသည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည်။ တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များအားလုံးပြည့်စုံမှသာလျှင် Subdistrict တရားရုံးသည်အလုပ်ခန့်ခြင်းစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
သို့သော်တစ် ဦး အားဖွငျ့ဖွစျသညျ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်ထုတ်ပယ်, သင် UWV အပြင် subdistrict တရားရုံးရှေ့တော်၌တရားစွဲဆိုမှုမှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာနိုင်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စမျိုးတွင်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများမှတဆင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းနှင့်သင့်တော်သောသဘောတူညီချက်များကိုရယူရမည် သင်၏ ၀ န်ထမ်းနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသဘောတူညီမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များအားအခြေချမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွင်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတွင်သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်မည်သည့်ပြင်းထန်သောငွေပေးချေမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုမဟုတ်သောအပိုဒ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်များကိုစာရွက်ပေါ်တွင်တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေတစ် ဦး မှသဘောတူညီချက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ စကားမစပ်, သင်၏ဝန်ထမ်းချုပ်ဆိုသဘောတူညီချက်များပြန်လာရန်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် 14 ရက်ရှိပါတယ်။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းကိုထုတ်ပယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ ထို့နောက်အောက်ပါအချက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်လည်းပညာရှိရာရောက်သည်။
အကူးအပြောင်းအခကြေးငွေ။ ဤပုံစံသည်ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အမြဲတမ်း (သို့) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ၀ န်ထမ်းအားပေးဆပ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောပုံသေနည်းအရဆုံးဖြတ်ရမည့်အနည်းဆုံးပြဌာန်းထားသောလျော်ကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ WAB ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ဤအကူးအပြောင်းငွေပေးချေမှုသည်သင်၏ ၀ န်ထမ်း၏ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်သော နေ့မှစ၍ စတင်သည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်သားများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများသည်လည်းအကူးအပြောင်းငွေကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဆယ်နှစ်ထက်ပိုသောအလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ရှိသည့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအဖို့အကူးအပြောင်းပေးချေမှုတိုးပွားလာခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာအလုပ်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်အတွက်“ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့” ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊
မျှတသောလျော်ကြေး. In addition to the transition payment, as an employee, you may also owe extra severance pay to your employee. This will especially be the case if there is serious culpable act on your side. In the context of this act, for example, the dismissal of an employee withoutavalid dismissal reason, the existence of intimidation or discrimination. Although fair compensation is not an exception, it only concerns special cases in which the court will award this fair compensation to the employee. If the court awards your employee fair compensation, it will also determine the amount on the basis of the situation.
Are you an employer who intends to dismiss your employee? Then contact Law & More။ တွင် Law & More we understand that dismissal procedures are not only complex but can also have drastic consequences for you as an employer. That is why we takeapersonal approach and together we can assess your situation and the possibilities. On the basis of this analysis, we can advise you on the correct next steps. We are also happy to provide you with advice and assistance during the dismissal procedure. Do you have questions about our services or about dismissal? You can also find more information about dismissal and our services on our site: Dismissal.site.
ယခင် Post မှ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတောင်းဆိုချက် - သင်ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲ။
Next Post ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကဘာလဲ?